အရှက်တရားနဲ့ တည်ဆောက်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရှက်တရားနဲ့ တည်ဆောက်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်
အရှက်တရားနဲ့ တည်ဆောက်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်
Posted by alinsett on Nov 15, 2016 in Creative Writing, Critic, Environment, History, My Dear Diary | 10 comments
Thint Aye Yeik's Creation ရန်ကုန်မြို့နှင့် ထိုင်ခုံခါးပတ်
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ တစ်ရက်နေ့က စပြီး ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ ကားမောင်းသူတွေ ထိုင်ခုံ ခါးပတ် မပတ်ရင် အရေးယူ ဒဏ်ရိုက်မယ်။
အဲ့လို ကြေညာလိုက်ပြီးနောက် ဆယ့်ငါးရက်အကြာမှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ထဲ မိန်း လမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်ကနေ မောင်းနေတဲ့ကားတွေကို တစ်နာရီလောက် ထိုင်ကြည့်နေမိတယ်။
ကားမောင်းသူ တော်တော်များများကတော့ ထိုင်ခုံခါးပတ်တွေကို ပတ်ထားကြပြီ။
အရင်တုန်းက ”စည်းမရှိကမ်းမရှိ ပစ်စလက်ခတ် မောင်းတယ်လို့ နာမည်ထွက်နေတဲ့ Taxi မောင်းသူတွေ”တောင်မှ ခါးပတ်လေးတွေ ပတ်ထားလျက်သား တွေ့ရတယ်။
(BRT ကလွဲရင် တခြား ဘတ်စ်ကား မောင်းသူတွေကတော့ ခါးပတ် မပတ်ကြဘူး။ ပတ်စရာ ခါးပတ်လည်း အဲ့ဒီဘတ်စ်တွေမှာ မပါလောက်ဘူး။
အင်မတန်မှ သက်တမ်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကားအို ကားဟောင်း အစုတ်ကြီးတွေကို မောင်းနေရတဲ့ ဘတ်စ် မောင်းသူတွေလည်း ဒဏ်ငွေရိုက်မှာ ကြောက်ပြီး ပတ်ချင်ရှာမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကားကိုက စုတ်ပြတ်လွန်းတော့ ခါးပတ်တောင် ဘယ်နား အစရှာရမှန်း မသိတဲ့ပုံ။ ရန်ကုန်မြို့ထဲက ဘတ်စ်တွေကိုတော့ ချွင်းချက်ထားရတော့မှာပေါ့။)
အစီးတစ်ရာလောက်ကို လိုက်ကြည့်မိတာ။ ၁၀၀ မှာ ၁၅ ယောက်လောက်က ခါးပတ် မပတ်ကြတာကို တွေ့ရသေးတယ်။
တွေ့ရသလောက်တော့ အခုလို ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ထားတာတောင် ခါးပတ် မပတ်တဲ့သူတွေဟာ. . .
များသောအားဖြင့် ခါးပတ် မပတ်ဘဲ မောင်းနေတာတွေက ကိုယ်ပိုင်ကား အိမ်စီးကား အသန့်တွေ။
ပြီးတော့ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် မောင်းနေတာ တွေ့ရတယ်။
ကိုယ့်ကားအကောင်းစားကြီးကို ကိုယ်တိုင် မောင်းပြီး ဘယ်သူ့မ ဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံချို့ထားတဲ့ တချို့(တချို့)ပေါ့။
ကြည့်ရတာ. . .
သူတို့ကို ရဲက တားပြီး ခါးပတ် မပတ်တဲ့အတွက် ဒဏ်ငွေ ဆောင်ပါ လို့ ပြောရင် ရဲရဲ့စကားကိုတောင် အဆုံးထိ မစောင့်ဘဲ ရော့ အင့်ဆိုပြီး ငွေနဲ့ ပစ်ပေါက်သွားမယ့်ပုံစံလေးတွေ။
သူတို့က ခါးပတ် ပတ်ရတာ လွတ်လပ်မှု မရှိ/ သက်တောင့်သက်သာ မရှိလို့ . . .
ပြီးတော့ ဒဏ်ငွေ ဆောင်ရတဲ့ပမာဏကလည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေအတွက် မပြောပလောက်တာမို့ ခါးပတ် ပတ်ခြင်း/မပတ်ခြင်း/မပတ်လို့ ဒဏ်ရိုက်ခြင်းတွေကို ဂရု မစိုက်ဘူးပေါ့။
ဂရုစိုက်ရင် ပတ်မှာပေါ့။ မပတ်တာဟာ အဲ့ဒါတွေကို ဂရုမစိုက်လို့ပေါ့။
(အဲ့လို ငွေဒဏ်လောက်ကတော့ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုသူတွေအတွက် ဂရုစိုက်ရလောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ကြိမ်ဒဏ်။)
ဆိုတော့ ဂရုစိုက်လို့ ခါးပတ် ပတ်နေတဲ့ သူ. . .၁၀၀ မှာ ၈၅ ယောက်လောက် ရှိတယ် ဆိုပါစို့။
အဲ့ထဲမှာ . . .
(အရင်က မပတ်ပေမဲ့ ) အခု ပတ်တဲ့သူတွေရယ်. . .
(၂)ကားမောင်းရင် ခါးပတ်ဆိုတာ ပတ်သင့်တယ်ထင်လို့/
မတော်တဆမှု ဖြစ်တဲ့အခါ ခါးပတ် ပတ်ထားရင် အနာတရ နည်းပါးစေနိုင်တယ်ထင်လို့/
အန္တရာယ်ကင်းအောင် အရင်ကတည်းက ပတ်တဲ့သူတွေရယ်. . . ဆိုပြီး
နှစ်မျိုး နှစ်စား ထွက်လာမယ်။
ဒုတိယ အမျိုးအစား(ခါးပတ်ကို အန္တရာယ်ကင်းဖို့ အစကတည်းက ပတ်သူတွေ)က အတော် နည်းပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ မတိုင်မီကနေ ဟိုးးးးး လွန်ခဲ့သော နှစ်များဆီထိ ပြန်မြင်ယောင်ကြည့်ရင် သိပါတယ်။
ကားမောင်းရင် ခါးပတ် ပတ်တဲ့သူဆိုတာ အတော် နည်းခဲ့တာပဲ။
ဒဏ်ရိုက်ခံရမှာ ကြောက်လို့ နိုဝင်ဘာလမှာမှ စပြီး မဖြစ်မနေ ခါးပတ် ပတ်တဲ့သူတွေက များပါတယ်။
ကျနော့် ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော် ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ) ဆိုဆုံးမတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ပြန် သတိရမိပါတယ်။
”ငရဲကြီးမှာ ကြောက်လို့ အကုသိုလ်အလုပ်ကို မလုပ်ဘဲနေတာထက်. . .
ကုသိုလ်အလုပ်ကို မြတ်နိုးလို့ အကုသိုလ်မဖြစ်အောင် (ကုသိုလ် ဖြစ်အောင်) အကုသိုလ်အလုပ်ကို မလုပ်မိအောင် ရှောင်တာက ပိုမြတ်ပါတယ်” တဲ့။
အခုလည်း ကြည့်. . .
ဒဏ်ရိုက်မှာ ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ ခါးပတ် ပတ်ကြပြန်ပြီပေါ့လေ။
ဒဏ်ရိုက်မှာ ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ . . . .
ထိုင်ခုံခါးပတ်ဆိုတာ. . . ကားမောင်းသူတွေအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်လို့ ကား ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေက မပါ/ ပါအောင် ထည့် ပေးထားတဲ့အရာ။
(သိပ်မလိုအပ်ရင် ကားအပိုပစ္စည်းအဖြစ် သီးသန့်ဝယ် တပ်နေရမှာပေါ့။) အခုဟာက လိုအပ်လို့ကို ကားထုတ်လုပ်ကတည်းက ထည့်ပေးထားတာ။ အဲ့ဒါကို ပတ်ပြီး ကားမောင်းရင် လူ့အသက် အန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေတယ်လို့ သိတဲ့အသိနဲ့ (ဒဏ် ရိုက်သည်ဖြစ်စေ မရိုက်သည် ဖြစ်စေ) ပတ်သင့်တာပါ။
”ခါးပတ် ပတ်လို့ ဒဏ်ရိုက်မယ်”ဆိုရင်တောင် ဒဏ်အရိုက်ခံပြီး ပတ်သင့်ပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီ အခြေခံ အသိလေးကိုတောင်
ဒဏ်ရိုက်ခြင်း/အပြစ်ပေးခြင်း ဆိုတာကြီးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်ကာမှ
ထ လုပ်မိကြတယ်ဆိုတော့. . .
”လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်ကြဖို့/ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တာကို မလုပ်ကြဖို့. . . ဒီလိုပဲ ခြိမ်းခြောက်/ ဒဏ်ရိုက်နေရဦးမှာလား”လို့ မေးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒါ မမေးကောင်းတဲ့ အမေးပါ။
ဒါမျိုး မေးစရာ မလိုအောင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲကြရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဟိုဟိုဒီဒီ လက်ညှိုးလျှောက် ထိုးပြီး ”သူတို့ သူတို့တွေ ပြင်သင့်တယ်ကွ”လို့ ကျနော် ပြောမနေပါဘူး။
ကျနော်က စပြီး ပြင်ပါမယ်။
အယောက် ၁၀၀ ထဲမှာ ၁ယောက် ပြင်လည်း မရှုံးပါဘူး။ ၁၀၀ လုံး မပြင်ဘဲနေရင်သာ ရှုံးမှာပါ။
(လူကူးမျဉ်းကြားက ကူးပါ ဆိုရင် ဒဏ်ရိုက်ခံရမှာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ အန္တရာယ် ကင်းနိုင်ချေရှိတဲ့ (ကားတွေ အရှိန်လျှော့ပေးရမယ့်)နေရာမို့ ဆိုပြီး ကူးပါမယ်။
ဂငယ် မကွေ့ရဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာ တန်းစီပြီး ကွေ့နေကြတာမျိုးကို ရှောင်ပါမယ်။
မကွေ့ရလို့ အမိန့်ထုတ်ထားလျက်နဲ့ ကွေ့တာကို ရဲက မိရင် ဒဏ်ရိုက်မှာ ကြောက်တဲ့ အကြောက်တရားကြောင့် ရှောင်မှာ မဟုတ်ဘဲ
စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်ရမှာကို ရှက်တဲ့စိတ်နဲ့ ရှောင်ပါ့မယ်။)
အဲ့လိုပဲ လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့ စည်းကမ်း ဟူသမျှကို အကြောက်တရားကြောင့် မဟုတ်ဘဲ
ကိုယ်က စ ပါမယ်။
၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ ၁၅
ဒါကတော့ ကမ္ဘာကျော် အပေါင်းလက္ခဏာ သင်္ကေတနဲ့ တန်ဖိုးကြီး ကားပါ။
(တစ်လမ်းမောင်းလမ်းထဲ လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းဝင်သွားတာမို့ မောင်းသူရဲ့စိတ်ဓါတ်ကတော့အနှုတ်လက္ခဏာ။)
ဘယာကြော်ပါ ။ သိပ်ကောင်းတယ်။
ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုသူ နည်းနေတဲ့ကာလမှာ ဖတ်ရုံမက အားပေးတဲ့ကွန်မန့်ပါ ပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အန်တီမျှစ်
ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလိပ်သွား သွားနေတော့ ခါးပါတ် ပါတ်ဘို့မလိုဘူးထင်လို့နေမှာ
ဖြစ်လာရင် လိပ်သွား သွားနေရင်းနဲ့ ဗြုန်းခနဲ ဘရိတ်ကို ဆောင့်နင်းရတဲ့အခါမှာတောင် ကားက တုံ့ခနဲအဖြစ်မှာ လက်ကိုင်ခွေနဲ့ ရင်ဘတ် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်မိတာပါပဲ။
ခါးပတ် ပတ်ထားတော့ အနည်းဆုံးတော့ ရင်ဘတ်နဲ့ဆောင့်မိမှာ မပူရတော့ဘူးပေါ့။
ကျနော်တော့ ခါးပတ် မပတ်ဘဲ မောင်းမိရင်ကို ဟာတာဟာကြီး ဖြစ်နေတာ။ ကား စထွက်ပြီဆိုကတည်းက ခါးပတ်ကို ပတ်မိလျက်သား။ အကျင့်ကို ဖြစ်နေပြီ။ ဘာမှ အပန်းမကြီဘူးလားလို့။
အောက်ပါ ဝါကျများဟာ FB မှာ ကျနော့်ပိုစ်ထဲ ဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ အပြန်အလှန် ပြောထာတာလေးပါ။ မှတ်တမ်းကျန်အောင် ဒီထဲ လာ ချန်ပါကြောင်း။
ကျနော့် မိတ်ဆွေ ။ ။ တထွာလောက်ရွေ့တဲ့ကားကပတ်စရာလားကွ
ကျနော်။ ။ ထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းထဲမှာ ”တစ်ထွာလောက်သာ ရွေ့သော ကားများ ပတ်စရာ မလို” လို့ ပါလားဟင်
ကျနော့်မိတ်ဆွေ။ ။ မပါ လို့ လိုလို့လားလို့မေးတာ … အမြန်လမ်းမှာလူမသေတော့ဘူးဆိုရင်ပတ်မယ် :))
ကျနော်။ ။ အဲ့လို မေးခွန်းမျိုး ဗမာပြည်မှာပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။
ကျနော့်ကားပေါ် တက်လာသမှ နိုင်ငံခြားသားတွေအများကြီး။
ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းထဲ တစ်နာရီလောက် ပိတ်မိနေရင်တောင် ခါးပတ် ပတ်လျက်သားခင်ဗျ။
ကားပေါ် တက်တာနဲ့ ၁ကီလိုမီတာလောက် ခရီးလည်း ပတ်တယ်ခင်ဗျ။
ကားပေါ် တက်တာနဲ့ မောင်းသူဖြစ်စေ ထိုင်စီးသူဖြစ်စေ တက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ပတ်လိုက်ကြတာပါပဲ။
. ဖြေးဖြေးလေးမောင်းလို့ မပတ်ဘူးဆိုတာလည်း မရှိ။ ကားဆိုတာ အချိန်မရွေး မတော်တဆ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတဲ့အရာ။ ပြီးတော့ ခါးပတ်ဆိုတာ ယာဉ်အသုံးပြုသူတိုင်း ပတ်သင့်လို့ ထည့် တပ်ထားတဲ့အရာ လို့ ယူဆ ရမှာပါ။
ဆိုတော့ ဖြေးဖြေးလေးမို့ မပတ်ချင်ဘူးဆိုလည်း ဆိုင်ရာ မြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကို ပြောပြပြီး သူကတဆင့် လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ လုပ်သင့်တယ်။
တရွေ့ရွေ့သွားနေတဲ့ကားများ ပတ်စရာ မလိုကြောင်း ဥပဒေပေါ့။
ပြီးရင် နိုင်ငံတကာကို ချပြကြည့်။
လူမသေရင် ဆိုတာကို ပြန် ဆွေးနွေးမယ်နော်။
ကျနော်မျိုးလည်း အမြန်လမ်းမှာ သတ်မှတ်စည်းကမ်းအတိုင်း အခေါက်ပေါင်းများစွာ မောင်းဖူးပါတယ်။
သတ်မှတ် စည်းကမ်းကို ဖောက်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ခဲ့သမို့ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့။
ကီလို ၁၀၀ ထက် ပိုမမောင်းရ လို့ စည်းကမ်းထုတ်ထားရင် ပိုမမောင်းရုံပေါ့။ ပိုမောင်းရင် ဖြစ်လာမယ့်ပြသနာကို အာမ မခံနိုင်လောက်တဲ့ လမ်းမို့ ၁၀၀ ထက် မပိုခိုင်းတာပေါ့။
ဒါကို အမြန်လမ်းကွ ဆိုပြီး ၁၅၀ နဲ့မောင်း။ ခါးပတ် မပတ်နဲ့ ။ ဖြစ်လာရင်တော့ အမြန်လမ်းကို ပုံ မချကြေးလေ။ ဘာလို့ ပိုမောင်းလဲ။ ဘာလို့ မပတ်လဲ လို့ ပြန်မေးရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
(ခါးပတ် ပတ်လျက်နဲ့သေရင်တောင် ပြန်မေးရဦးမှာက
ခါးပတ် ပတ်လို့ သေတာလား/မပတ်ရင် မသေဘူးလား)
အမြန်လမ်းမှာ မသေအောင် ကိုယ်မောင်းတဲ့ကားကို ဂရုစိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ စိတ်ကိုပါ ဂရုစိုက်ပေါ့။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် သေတော့မလဲ။
ကားတွေကို အမြန်လမ်းကြီးက ထပြီး လည်ပင်းညှစ်သတ်တယ်လို့တော့ မကြားမိပေါင်။
ခါးပတ် ပတ်ရမှာကို ဝန်လေးနေသူတွေကို တစ်ခုပဲ ပြန်မေးချင်တာ။
”ကားမောင်းတုန်း ခါးပတ် ပတ်ရတာ
ဒီထက် တဆင့်တက် မေးရရင်
ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အန္တရာယ် မဖြစ်စေချင်လို့ ကောင်းစေချင်စိတ်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကို လိုက်နာရမှာ အပန်းကြီးပါသလား?
လျှာယား လက်ယားကြလို့ ကြေညာ ရေးသား ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အပိုစာသား စည်းကမ်းပါ လို့ ထင်သလား?
ကျနော့်မိတ်ဆွေ။ ။ အမြန်လမ်းမှာသေတာလမ်းကြောင့်ကနဲနဲရယ် ကားဆရာတွေပေါ့ဆမှု့ကြောင့်ဖြစ်တာများသပ။ အဲတော့မပေါ့ဆအောင်အမြန်လမ်းမှာလိုအပ်တာတွေလုပ်လေ။ အမြန်လမ်းတောင်မနိုင်ဘဲနဲ့တထွာရွေ့တဲ့လမ်းလာလုပ်တော့ ခွင်ဖန်ချင်တာလားစဉ်းစားစရာ ဟိုဖက်ကဖိဒီဘက်ကကြွဆိုတတာမဖြစ်စေလိုပါ။ မြို့ထဲခါးပတ်မပတ်တာတွေလှိမ့်ဖမ်း အမြန်လမ်းကြသောက်သောက်လဲသေ။
နိုင်ငံခြားမှာမြို့ထဲလဲပတ်ရတယ်ဆိုတာ မြို့ထဲမောင်းတဲ့ကီလိုကြည့်လိုက်ပါ။ သေတောင်သွားအုံးမယ်ဗျ။ခါးပတ်ကတော့ပတ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့ အကျင့်ဖြစ်အောင်ပါ။ ဒါပေတဲ့ အရေးကြီိးတာအရင်လုပ်ပါ။ ဟိုနေရာတောင်မနိုင်ဘဲ ဒီမှာလာပြီးတထွာကိုဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုတာ…
အမြန်လမ်းကိုလည်း လိုအပ်တာတွေ လုပ်နေပါတယ်။ လုပ်နေတာတွေ မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးလေးလည်း သွားကြည့်ရင် မြင်မှာပါ။
စနစ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း စည်းကမ်း ဘယ်လောက် ထုတ်ထုတ် ကန့်လန့်တိုက်သူတွေ စည်းကမ်းလိုက်နာရမှာ ဝန်လေးသူတွေ ရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာလည်း ဦးလေး မြင်မှာပါနော်။
သူကြီး ပြောသလို ပြောရရင်
အမြန်လမ်းကို အရင် နိုင်အောင် လုပ်ပြီးမှ မြို့တွင်း လုပ်သင့်တယ်ပေါ့နော်။
(ဒါဆို လွှတ်တော်ထဲလည်း အစိတ်သားကို အရင် ထုတ်ပစ်ဖို့ လုပ်ပြီးမှ ကျန်တာ လုပ်သင့်သလိုလို။ )
ဘယ်က စ လုပ်လုပ်
လုပ်တဲ့နေရာက စလိုက်တာ ပိုမကောင်းဘူးလား ဦးလေးရယ်။
ဟိုက စသင့်တာ မစဘူး
ဒီက စသင့်တာ မစဘူးဆိုပြီး ကန့်လန့် လိုက်တိုက်နေတာက ကောင်းလား
စည်းကမ်း မထုတ်/ ဒဏ်မတပ်ရင်တောင် ကားပေါ် တက်တာနဲ့ ပတ်ကို ပတ်သင့်တဲ့ကိစ္စကို (အပန်းလည်း မကြီးတဲ့ကိစ္စလေးကို) ပတ်လိုက်တာက မကောင်းဘူးလား။
”ဟေ့ မြို့တွင်းမို့ မပတ်ကြနဲ့။ အမြန်လမ်းပေါ်တောင် မနိုင်ဘဲ လာထုတ်တဲ့စည်းကမ်းကြီး မလိုက်နာကြနဲ့”လို့. . .
ကျနော်မောင်းတဲ့ကားကို စီးနေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်သိုက်ကို တိုက်တွန်းချင်လာပြီ။
ဦးလေး သိပ် အပြောကောင်း။
မင်းတို့နိုင်ငံရဲ့ မြို့ထဲလို အရှိန်နဲ့လည်း မောင်းလို့ မရတဲ့ ဒီဗမာပြည် မြို့ထဲ ဘာလို့ ကားပေါ်တက်တာနဲ့ ခါးပတ် ပတ်ကြတာတုန်း”လို့
ယာဉ်းစည်းကမ်းဥပဒေကို.. ဟိုဟာမလုပ်ရသေးလို့.. ဒီဟာမလုပ်ရမရှိ(ရ)ပါဘူး..
ဥပဒေထုတ်ပြီးလို့.. ခါးပါတ်တပ်ဆို.. တပ်ကြပေါ့..။
အမေရိကားမှာဆိုရင်တော့.. စည်ကမ်းထုပ်ပြီးရင်..မလိုက်နာသူကို ငွေနဲ့စက်လျှော်ခိုင်းလိုက်သမို့.. ဦးစားပေးစနစ်ပုံတော့ မြင်သာလာပါတယ်..။
အမြန်လမ်းမှာ.. ခါးပတ်မတပ်ထားလို့ဖမ်းရင်.. ဒဏ်ငွေကျပ် ၁သောင်း..
မြို့ထဲဆို.. ဒဏ်ငွေကျပ်ငါးထောင်.. အဲဒါမျိုး..။
ဟုတ်။ အဲ့လို နေရာအလိုက် အလျှော့အတင်း လုပ်ပြီး ဒဏ်ရိုက်ရင် ပိုကောင်းမှာ။
ဒီမှာက ခါးပတ် မတပ်ချင်တဲ့ လူတွေ အတော် ရှိသေးတယ်။